डाक्टर साहेव – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:४६ मा प्रकाशित
डाक्टर साहेव र सरकारबीच गएको शनिवार मध्यराती सहमतियाँ हस्ताक्षर भएछ । विचरा डाक्टर साहेवकोे १९ औँ अनसन २६ दिनाँ भनम कि २७ दिनाँ तोडिएछ । माग हेर्दा यी माग केसीका नभएर सरकारले नै गर्नुपर्ने र सरकारकै माग हुन् । यी माग त केसीले उठाइ दिएका मात्रै हुन् । अस्पताल चाइयो, दुरदराजमा डाक्टर पढाउनुपर्यो, योग्ताअनुसारका मान्छेलाई नियुक्ति देउ भन्ने कुरा डाक्टरका निजि माग होइनन् होला । तर पनि सरकारले डाक्टरप्रति ईष्र्या साँधेर २६ दिनसम्म अनसनाँ बस्ने जुन बाध्यता सृजना गर्यो त्यसलाई हेर्दा र सम्झौताँ उल्लेख गर्या तष्mभ ष्mिष्तबतष्यल लाई हेर्दा फेरि पनि यी माग पूरा नहुने निश्चित छ ।
विगताँ अनसन तोडाउने कमिटी जसरी साँक्षि बन्दै आए । यस पटकको मागाँ नि सरकारी समिति साँक्षि नै हो । ८० सालाँ माग पूरा गर्ने भन्ने जुन उल्लेख छ यै कुराले डाक्टर साहेवका माग पूरा हुन्न भनेर ठोकुवा गरिया हो । ल सबैले भन्नोस् यो सरकारको आयु कति ? अबको २ बर्ष । अर्थात ७९ सम्म । अनि ७९ पछि सरकार काँग्रेसको आयो भने सरकारले कसरी माग पूरा गर्छ । आखिर त्यो पार्टी पनि निजी क्षेत्र भनेर डङ्का पिटेर हिँडिरा हुन्छ । मेडिकल कलेज चलाउन दिम्ला भनेर देउवाले कति दलाल पाल्या होलान् । आरजुका दलाल त झन् देउवा सरकाराँ गा भोलिपल्टै बाटो छेक्न जाने होलान् । अनि ती दलाललाई मेडिकल कलेज खोल्न नदेर सरकारी मेडिकल कलेज र डाक्टर साहेवले नियुक्ति गर भन्या मान्छे किन गर्ने भए ।
देउवाको पालाँ नि त केसीले माग राखेर अनसन गरेकै हुन् । त्यो बेलाँ के माग पूरा भाथे र ? भाको भा १९ औँ पटकसम्म अनसन बस्ने रहर त डाक्टर साहेवलाई थेन होला । ल देउवा सरकार बन्दैन कमिनिष्टकै सरकार बन्छ यो १६ ऐ आना सत्य हो । तर ओली त प्रधानमन्त्री हुन्नन् । प्रचण्ड र ओली बीचको सहमति हाम्ले सुनेकैछम् । अबका कमिनिष्टका प्रधानमन्त्री भनेका प्रचण्ड हुन् । अनि प्रचण्ड का छत्रछायाँ देश लुटन बस्या दलाल कतिछन भन्ने कुरा सडक नवनाउनेदेखि पैसा खाने मल नल्याउनेसम्का रैछन् भन्ने कुरा त ऐल्यै देख्खिया छन् । भने मेडिकलको क्षेत्राँ त झन् कुरै नगरम् ।
त्यसैले डाक्टर साव यो चोटिनी ओलीजीले तपाइँलाई राम्रैसित बोराँ सुताए भन्ने कुरा म ठोकुवा नै गर्न सक्छु । जनताका लागि केही गर्छु भनेर अनसनको १९औँपटकसम्म आइपुग्दा जनता आँफै तातेर केसीसित गर्या माग पूरा गर भनेर जनता नै सडकाँ आउनुपर्ने ठाँ तपाईं नै घरिघरि अनसनाँ आउनुपर्ने कुराले अब तपाइँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने मलाइमात्रै चाइने जनतालाई नचाइने हो भने म मात्रै सडका आएर के काम ? भन्ने बुझेर अब ज्यान जोखिममै नपारेको राम्रो । जसका लागि केही गर्न खोजेको त्यैनै केही गुन मान्दैन भने किन गर्नुपरो । त्यसैले डाक्टर साहेव यो देशका राजनीतिज्ञ र सरकार जैलेसम्म चैतेहरको जालमा रहन्छ, त्यैलेसम्म जनताका लागि केही हुनेवाला छैन । रमिते सरकारको दर्शक हुने बस्ने । हाम्रो दिनचर्या अब यै हो ।